ပိန်နည်းလေးများသိရင်ပြောကြပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ပိန်နည်းလေးများသိရင်ပြောကြပါ။
Posted by search123 on Oct 9, 2010 in Health & Fitness | 26 comments
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ forward mail ထဲမှာ နံနက်စောစော ငှက်ပျောသီးတစ်လုံး စားပြီး ရိုးရိုးရေ တစ်ခွက်သောက်ရင် အစားလျှော့စရာ မလိုပဲ ဝိတ်ကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရုတ် တိုင်းရင်းဆေးနည်းလို့ ဆိုပါတယ်။ အခု အဲဒီနည်းကို စမ်းနေပါတယ်။ အခြားသော နည်းလမ်းကောင်းလေးများ ရှိရင်လည်း ပေးကြပါဦးနော်။ ပေါင် ၂ဝ လောက် ကျချင်လို့ပါ။
search123 has written 25 post in this Website..
View all posts by search123 →
ငှက်ပျောသီးရဲ့အမည်နာမလေးများ မရှိပေဘူးလား
ဒီနည်းလေးကတော့ ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးမို ့
လုပ်ကြည့်ဖို့ဝန်လေးပုံ မပေါ်ပါဘူး
ရခိုင်လား၊ဖီးကြမ်းလား၊သီးမွှေးလား၊ကလား လား၊ ဘာမျိုးညာမျိုးပေါ့
MYO MYINT AUNG says:
လွယ်ပေမယ့်လူတိုင်းမသိတဲ့နည်းပေးပါမယ်………………………………မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့သွားကို ဆားနဲ့တိုက်…ပြီးရင်ရိုးရိုးရေ(ရေခဲရေမရပါ)ကိုပါးစပ်အပြည့်ငုံပြီး…3ရက်လောက်ကြာမှထွေးထုတ်…..15ပေါင်လောက်တော့ သုံးရက်အတွင်းကျသွားလိမ့်မယ်……………….( နာလုပ်ကြည့်တာ4မိနစ်လောက်ဘဲရတယ် )
mail ထဲမှာ ငှက်ပျောသီး အမျိုးအစား ထည့်မရေးထားလို့။
လောလောဆယ် တော့ ဖီးကြမ်း ငှက်ပျောသီးပဲ စားကြည့်နေတယ်။
တကယ်ပိန်ချင်ရင် စိ်တ်ဆင်းရဲအောင်နေ အလိုလိုနေရင်းကိုပိန်သွားမှာ။
စိတ်ဆင်းရဲတုန်းကတော့ ပိန်သွားတာပေါ့.. ဒါပေမဲ့ စိတ်ချမ်းသာကော ပြန်ဝလာကော.. ပြန်ပိန်ချင်ကော.. ပိန်ကို မပိန်ဘူး.. စိတ်က ချမ်းသာနေတာကိုး..
ဒါမျိုးလည်း ဆူး ကိုယ်တွေ့ကြုံဘူးတယ်
နေ့စဉ်သံပုရာသီး ၅ လုံးခန့် အရည်ညှစ်သောက်ပါ
လက်တွေ့ပြောမယ်နော်။ ခင်ဗျားပေါင်နှစ်ဆယ်ကျဖို့ တာဝန်ယူတယ်။ ညစာမစားပါနဲ့ မနေနိုင်ရင် တဖြည်းဖြည်းချင်လျော့ပါ။ စိတ်ခိုင်ရင် ကိုယ့်ကျန်းမာရေး လည်းကိုယ်ယုံရင် ကုသိုလ်လည်းထိန် ပိန်လည်းပိန် အဓိဌာန်လိုမျိုးနဲ့ ရက်ရှည်ဥပုဒ်စောင့်။ အာမခံတယ်။ သက်သက်လွတ်ကို လနဲ့ချီပြီး စားရင်လည်း အသားမပါတော့လို့ စားချင်စိတ်နဲသွားလိမ့်မယ်။ ပဲသာများများစားပေး ပရိုတင်းအသားဓာတ်အတွက် မပူနဲ့။
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ သက်သတ်လွတ် အဓိဠာန် ၁၆ရက်စားလိုက်တာ ၁၅ပေါင် ကျသွားတယ်။ ဟီးဟီး.. အခုတော့ အရင် အတိုင်းဘဲ
ဂေါ်ဖီထုပ် ကိုများများသာစာပေး ဂေါ်ဖီက လေပွတယ် အဲ့ဒါစားထားရင် ဗိုက်ဆာမှန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူး ……… ဗိုက်မဆာလို့ ဘာမှမစားဘူးဆိုပိန်လာမယ် ….. ဟိဟိ
အဲ့ဒီ သုံရာရည်က အစာမရှိရင် အချဉ်ပေါက်သွားနိုင်တယ်တဲ့နော် …
ထမင်းမစားခင် ထမင်းဝိုင်းထဲက ဟင်းရည်တစ်မျိုးမျိုးကို အရင်ကုန်အောင်သောက်ပြီး ထမင်းစားရင် ဝိတ်ကျတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဟင်းရည်တွေနဲ့ ဝသွားတော့ ထမင်း သိပ်မစားနိုင်တဲ့သဘောပေါ့။ ဝချင်ရင်ကျတော့ အဲဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်တဲ့။
comments အားလုံး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ငှက်ပျောသီးနဲ ့diet လုပ်တာ ခုနောက်ပိုင်း ခောတ်စားတယ်။
ဂျပန်ပြည်မှာဆို Banana diet story အဖြစ် ထင်ရှားပြီး အုပ်ရေ ၆ သိန်းကျော် ရောင်းရတယ်ဆိုပဲ ။ မနက်စောစောထပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပါ ပါမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန် တခွန်ကုက္ကား အမြန်ဝိတ်ကျမှာ မလွဲပဲ
etone ကတော့ စားချင်တာစားတယ် ၊ ဝတော့ မလာဘူး ၁၁၅ လောက်နဲ့ပဲ ထိန်းထားတယ်… ။ စားသမျှ လှုပ်ရှားသွားလာရင်း ကြေပျက်ကုန်တယ် ထင်တာပဲ … ။ လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ကတော့ အပြေးလေ့ကျင့်ပါတယ်…. ရုံးမှီအောင် မျက်လုံး မပွင့်ပဲ မနက်တိုင်း ထပြေးတာပါပဲ
ကမာ္ဘ့လူဦးရေ ရဲ့ ၇၇.၉၆ % က ပိန်ချင်နေကြတာကို..
Dear Search 123, to lose weight, diet and exercise are important. Take some exercise (walking) for 15 minutes in the morning and 15 minutes in the evening. Reduce amount of diet taken. Have halfaplate instead of full plate. Or put some amount of food from your plate you are intend to have . Use chopsticks to take food so that it will take longer time to finishasmall amount of food. If possible, have vegetable and fruits only, not meat. Avoid fried food. Have boiled vegetable for the dinner. No coffee, tea, beer or liquor. Having soup before meal isagood idea to reduce amount of food you are going to take. I have practice it for 4-5 months and I lost 20 pounds and my belt size reduced from 36 to 32. Please try it. Enjoy healthy life.
Dear Myanmar, thanks for your sharing.I will make it.
အီးတုံးက ၁၁၅ ဆိုတာ ပေါင်လား၊ကီလိုလားဟင်….။အမှန်တကယ်ပိန်ချင်ရင်
နံနက်စောစောအိပ်ထပြီး အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။တပတ်မှာအနည်းဆုံး (၅)ရက်လုပ်ပါ။အဆီအစိမ့်ပါသော အစားအစာများကိုရှောင်ပါ။လေ့ကျင်ခန်းလုပ်ပြီးလျှင် အစာကိုအများကြီးမစားပါနှင့် ညနေတိုင်းရေကူးပေးပါ။နှစ်လ အတွင်းအဆီကျပြီးမပိန်လျှင်ငွေပြန်လျော်မည်။ကျွန်တော် အရပ် ၅ပေ၊၁၁ လက်မ ရှိပါသည်။ တစ်ခါမှ ပေါင် ၁၃၅ မကျော်ဘူးပါ။အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား အားလုံး စမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။
အောင်မလေးလေး ……….ပေါင်ပါတော် … ကီလို မဟုတ်ရပါဘူး ။ မနက်တိုင်း သီးသန့်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နိုင်လို့ ရုံးအမှီပြေးနေရတာပါ … ။
အရမ်းကြီးဝနေတာ မဟုတ်ရင် YOGA ကစားပါလား။ Body fitness လိုဟာမျိုးက ခဏလေးကစားပြီးဆက်မကစားရင် ၂ဆပြန်ဝတတ်တယ်လို့ကြားဖူးလို့။ဟီး.. သမီးကတော့ ထမင်းစားပြီးရင် သံပုရာရည်သောက်တယ် သကြားမထည့်ပဲရေရောပြီး… မေမေကတော့ပြောတယ် အစာအိမ်ထိရင်ကုမပေးဘူးတဲ့
လမ်းများများလျှောက်ပေးပါ..။ တတ်နိုင်ရင်ပြေးတက်ပြေးဆင်း (ဥပမာ မန္တလေးတောင်လိုဟာမျိုးကို) လုပ်ပေးပါ။ 14 ရက်နဲ့ပိန်သွားနိုင်ပါတယ်။ မန္တလေးတောင်ပေါ် ပြေးတက်ပြေးဆင်း တစ်နေ့ နှစ်ခေါက်လုပ်လိုက်တာ 10ရက်နဲ့ ပိန်သွားတဲ့သူတွေ့ဖူးတယ်။ အထိုင်များရင် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ရင် အဆီအစိမ့် စားတာများရင် ပြန်ဝနေမှာပါပဲ။ ဝတဲ့သူတွေကို သေချာကြည့်ရင်..အဖန် အခါး အစပ် စားတာနဲပါတယ်..။
“မန္တလေးတောင်ပေါ် ပြေးတက်ပြေးဆင်း တစ်နေ့ နှစ်ခေါက်” pagoda..pagoda…
I like YOGA exercises.
ကျိန်းသေ ပိန်သွားစေရမယ်။ လုပ်မယ်ဆိုရင် နည်းပေးမယ်။
အဟမ်း….နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပေးလိုက်မယ်။ အပေါ်က အာဝါဒါးတွေ ပြောတာ တခုမှ မယုံနဲ ့။
တကယ် လက်တွေ ့။
(၁) တနေ့ဆေးလိပ် ၁ ဘူး သောက်။
(၂) တနေ့အရက် တစ်တောင့်သောက်။
(၃) သောက်ပြီး အိပ်ချိန်ကို ည ၂ နာရီ သတ်မှတ်။
(၄) မနက် အိပ်ရာ ထထချင်း ဆေးလိပ် တစ်လိပ်သောက်
(၅) အိမ်သာဝင်ရင် တလိပ်သောက်။
(၆) ရေချိုးပြီး ရင် တစ်လိပ်သောက်။
(၇) ပြီးရင် အလုပ်ကို မနက်စာ မစားပဲသွား။
(၈) အလုပ်ထဲ ရောက်ရင် ကော်ဖီ တစ်ခွက်သောက်။
(၉) ပြီးရင် ဆေးလိပ် တစ်လိပ်သောက်။
ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင် ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်။
ပိန်ရုံတင် မက ဘူး။